London - Socdaal Absolut | Safarka Absolut
by Susana godoy samee 4 sano .
Caasimada England waa meel kale oo ay doortaan dalxiisayaal badan. Ku raaxeysiga London 4 maalmood gudahood waa ...
Camden Town waa xaafad ka mid ah London, oo ku taal Camden. Waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah ...
by Susana godoy samee 5 sano .
London waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiiska badan. Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay geesahaas muhiimka ah, matxafyada ...
Ma taqaan cabitaannada caadiga ah ee England? Boqortooyada Midowday (UK), shaki la’aan waa mid kamid ah kuwa ugu booqashada badan ...
Quraacda caadiga ah ee Ingiriisiga ahi waa hay'ad qaran. Inta badan dadka reer UK waxay ku raaxaystaan ​​quraac sida ...
by Absolut London samee 10 sano .
Markaan tagnay magaalada London booqasho iyo safar dalxiis micnaheedu maahan inaan kaliya noqonno ...
Shakespeare's Globe waa mid ka mid ah meelaha loogu jecel yahay in lagu raaxeysto sida ugu fiican ee shaqooyinka kala duwan ee ...
by Absolut London samee 11 sano .
Tirada weyn ee taalladaha iyo dhismayaasha xiisaha dalxiis ee magaalada London ayaa aad u badan ...